Cool Geometric Tattoos Design Mazano Kwauri - Tattoos Art Ideas
Cool Geometric Tattoos Design Mazano Kwauri
Izwi rejometri rakange riri chimiro chekare chekare chakave chichishandiswa kureva zvinhu zvakawanda kunyanya kana zvichisvika pane zvekunamata zvinyorwa.
A # tattoo yekare inoreva zvakawanda kupfuura zvaunogona kufunga nezvazvo. Iine chigadzirwa chakanaka chakafanana nechikonzero. Izvo zvinorongwa izvi zvinopfuurira uye zvakananga. Chimiro chacho chine zvizhinji zvokuita nemathematics uye nguva dzose chiri chinyorwa icho vanhu vakawanda vanoshandisa kumira zvakananga, kuenzanisa uye kusagadzikana. Inotaurawo nezvekufanotaurika nekuda kwenzira iyo yakagadzirwa.
Geometric #tattoo zvinoreva kureva kusagadzikana uye tsika. Zvose zvine geometric zvinoratidza kugutsikana uye kufara, uyewo iyo iyo iyo ineded inoita kuti ive imwe yevasingadikanisi yerottoo. Chinhu chinoita kuti vanhu vakawanda vawane mufaro vanogona kutorwa pane tattoo. Girazimiro tattoo yakave iyo bhiriji iyo yakawanda yekushandisa mukukoshesa zvavakawana muupenyu.
Paunenge uine chinyorwa che # tattoo mumatangariro ako, usabvumira kuti mari yacho iite kuti urege kuinwa.
Dzokera Gemikari Tattoo
Mutengo we tattoo wakaita izvi unogona kuvhiringidza vanhu vakawanda kuti varege kuenda kune iyo kana zvichibva kune unyanzvi.
Chidzitiro cheGeometric Tattoo
Nzira yakanakisisa yekuti iwe uve nekodha yakanaka yekutora kana iwe uchitora nguva yako kutarisa zvaunoda.
Leg YeGeometric Tattoo
Kutenga hakusi kwepamusoro pezvinhu zvenyama. Iwe unogona kutengesa rudzi rwe tattoo iwe unoda kuva nawo.
Bhizinesi rekuti tattoo haina kutanga nhasi. Mazuva ano, tiri kuona mazana emasikirwo anoita tatiki nenzira yakadai kuti iwe haugoni kubatsira asi unoshamisika kuti vanoumba sei chimiro cheunyanzvi.
Akabatisa Geometric Tattoo
Chisarudzo chekuwana unyanzvi wemhizha chinosara kuti iwe usarudze. Iwe unofanirwa kuenzanisa nheyo uye tarisa mazano asati waita tattoo iyi.
Iwe unofungei nezvetambo iyi inoshamisa? Mari yekuita iyo inogona kukushamisa iwe.
Iwe haufaniri kukanganisa kunaka kwezvinhu zvishoma. Vanhu vaizoona unyanzvi hwako mumuviri uye kana hwakashata zvakaitwa, unogona kunge uri munyaya yakakomba. Iko kune vhidhiyo inopa vashandi mabhizimisi makuru. Izvozvi kukanganisa chimwe chinhu chaunofanira kutarisa nacho.
Flat rates for tattoos akadai ingasarudzwa kusvika maawa mana. Maawa awa maawa angangodaro ane mari inodhura iwe iwe ndicho chikonzero chizhinji chevanhu vane mafashoni savvy vanoda tattoo vanoenda kumapuranga akazara.
Shandisa Geometric Tattoo
Iyi tattoo inofanira kuitwa mune imwechete. Nhamba yemari yaunenge uchizobhadhara nayo chimwe chinhu chaunofunga kana iwe uchienda kune imwe yakagara. Iko mari inodhura kana ichienzaniswa nekuwana mapepa akasiyana-siyana eunyanzvi hwako.
Iwe unofanirwa kuva nechiso chekutarisana nhaurirano nemapurisa ako usati wagamuchira kune zvaunoudzwa nemuenzi. Kusangana nomudzidzisi wako kutanga usati waenda kunonyora kunokosha zvikuru. Izvi zvinokubatsira kuti ugare kure nedambudziko uye uitewo chisarudzo chakanaka.
Iyo geometry inoyera nekuda kweruzivo rwayo pane zvigaro mu sunflowers, chimiro, nautilus, succulents uye zvizhinji zvakawanda. Basa reunyanzvi rine chimwe chinhu chekuita nemafungiro edu anoziva. image source
Ikokuenzanisa uye kuwirirana kwayo ine mashematical equations kunogona kutarisa chete nekushandiswa kwetuti. image source
Mifananidzo yakajeka yeGeometric tattoo
Hazvina mhosva kuti izvi zvakaoma sei iyo tattoo inogona kutarisa kutarisa, inogara yakanaka mumaziso. Icho chinongova pfungwa uye zvishongo zvinotamba mutambo wakanaka. image source
Kufananidza Geometric Tattoo
Zvitadzo zvakave chimwe chezvinhu izvo vanhu vakawanda vari kunyanya kuvhara pfungwa dzavo. Basa rakawanda rakaoma rakaitwa nyore nyore nematoto. Tora inogona kushandiswa kutaura nyaya dzatisingakwanise kuzvitaurira isu. image source
Kushandiswa kwerottoo kwakatanga makore akawanda kunyange apo kushandurwa kwakanga kusiri nyore sezvino. Paiva nenguva iyo kutora tattoo kwakanga kusina musoro uye kunorwadza zvikuru. Mazuva ano takaona michina yakawanda yeinki kana tattoo yakave yakagadzira mifananidzo yekutema. image source
Geometry tattoo inogona kushandiswa sechiratidzo chetariro, hupenyu hutsva, rugare uye chiKristu. Vamwe vanhu vanowanzoshamwaridzana nemasimba ezvisimba kana kunyange zvekunamata. image source
Kune vamwe vanhu vanozvitora sechiratidzo cherudo rusingaperi. image source
Shandisa Geometric Tattoos
Iwe unogona kushandisa geometry tattoo kuti uratidze rusununguko. Iwe unogona kuzviona sekukudza uye simba rechiuto. Hazvishamisi kuti matatidzo akave akafamba mumakore achangobva kupfuura. Takaona maitiro akasiyana-siyana eadhamoni pamitumbi yevarume nevakadzi. image source
Ining ye tattoo yakaita seyi inoita kuti vanhu vakawanda vateerere. Iwe ungangodaro wakaona mazana emhando dzemavara asi nguva dzose paunoona tattoo yedhaimani, unoswededzwa kunaka kwayo. image source
Vadzidzisi Geometric Tattoo
Vakadzi havabhadharwi kubva pane iyi tattoo yakanaka. Kushandiswa kwemajimu ekugadzirwa kwemashizha kunogona kushandiswa nevakadzi. Izvi zvinorevei kuti vaviri vanogona kuishandisa kushandisa iyo kusimbisa ukama hwavo. Kune mhando dzakasiyana dzezvenjeredzi dzemajimu ezviyero izvo vakadzi vanogona kushandisa. image source
Dzvanya pano kuti uwedzere mamwe maGeometric Tattoos Design
arrow tattoobirds tattooselephant tattootattoos for girlstattoos kuvanhucouple tattoosangel tattoossleeve tattooscherry blossom tattootattoo ideasmimhanzi tattoosAnkle TattoosHeart Tattoosdiamond tattoocompass tattoocross tattoosrip tattoosshumba tattoomwedzi tattoosbutterfly tattooscute tattooseagle tattoosneck tattooslotus flower tattooback tattooskoi fish tattoorudo tattoosscorpion tattoomaoko tattoostribal tattoosGeometric Tattoosarm tattooszodiac zviratidzo zviratidzowatercolor tattooshamwari yakanakisisa tattooscat tattoosmehndi designoctopus tattoohenna tattooAnchor tattoosflower tattooskorona tattoostattoo yezisochifuva tattoosFeather Tattoozuva tattoosfoot tattooshanzvadzi tattoosrose tattoosinfinity tattoo